Забур 102 CARS - Nnwom 102 ASCB
Aberanteɛ mmɔborɔni mpaeɛbɔ. Ɛberɛ a ne home te no na ɔka nʼahometesɛm kyerɛ Awurade.
1Ao Awurade tie me mpaeɛbɔ;
na ma me mmoa ho sufrɛ nnuru wʼanim.
2Mfa wʼanim nhinta me
ɛberɛ a mewɔ ahohiahia mu.
na sɛ mesu mefrɛ wo a, gye me so ntɛm.
3Me nkwa nna reyera te sɛ wisie;
me nnompe hyehye te sɛ egya.
4Mʼakoma aboto na akusa sɛ ɛserɛ;
na me kɔn nnɔ aduane.
5Mʼapinisie denden enti
maka honam ne nnompe.
6Mete sɛ ɛserɛ so patuo,
te sɛ ɔpatuo a ɔte mmubuiɛ mu.
anomaa bi a ɔno nko ara si ɛdan atifi.
8Ɛda mu nyinaa mʼatamfoɔ bɔ me akutia.
Wɔn a wɔdi me ho fɛ no bɔ me din de dome.
9Mede nsõ ayɛ mʼaduane
na mede nisuo fra me nsuo mu
10ɛsiane wʼabufuhyeɛ denden no enti,
11Me nkwa nna te sɛ anwummerɛ sunsum;
na mekusa sɛ ɛserɛ.
12Nanso, wo Awurade, woyɛ ɔhene daa daa;
na wo din a ahyeta no te hɔ daa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
13Wobɛsɔre na woahunu Sion mmɔbɔ;
berɛ aduru sɛ wohunu no mmɔbɔ;
ɛberɛ a wohyɛeɛ no aso.
14Nʼaboɔ som bo ma wʼasomfoɔ;
ne mfuturo hyɛ wɔn awerɛhoɔ.
15Amanaman no bɛsuro Awurade din;
asase so ahemfo nyinaa bɛdi wʼanimuonyam ni.
na wapue wɔ nʼanimuonyam mu.
17Ɔbɛtie mmɔborɔfoɔ mpaeɛbɔ;
18Montwerɛ yei mma nkyirimma,
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔnnya nwoo wɔn bɛkamfo Awurade;
19“Awurade hwɛɛ fam firi ne kronkronbea wɔ soro hɔ;
ɔfiri soro hwɛɛ asase,
20sɛdeɛ ɔbɛte nneduafoɔ apinisie
na wagyaa wɔn a wɔabu wɔn kumfɔ no.”
21Enti, wɔbɛpae mu abɔ Awurade din wɔ Sion
22ɛberɛ a amanaman ne ahennie ahodoɔ
bɛhyiam na wɔasom Awurade.
23Ɔmaa me yɛɛ mmerɛ wɔ ɛberɛ a merenyini.
Ɔtwaa me nkwa nna so.
24Enti mekaa sɛ,
“Ao me Onyankopɔn, mfa me nkɔ, wɔ me nkwa nna mfimfini;
wo mfeɛ wɔ hɔ daa kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
25Ahyɛaseɛ no, wotoo asase fapem,
26Ne nyinaa bɛtwam, na wo deɛ, wobɛtena hɔ daa;
wɔbɛtete te sɛ atadeɛ.
Wobɛsesa wɔn te sɛ ntoma
na wɔbɛto wɔn agu.
27Nanso, wote sɛdeɛ woteɛ,
na wo mfeɛ to rentwa da.
28Wʼasomfoɔ mma bɛtena nkwa mu wɔ wʼanim;
na wɔn asefoɔ ase bɛtim wɔ wʼanim.”
ASCB : Nnwom 102